AKKAATA MOLUU OFIRRAA ITTISAAN – siifsiin
Wantootni dargaggoota sodaachisu keessa inni tokko mataa moluu qabaachu dha. Keessattuu dargaggootni utuu umriinsaani ol hin guddatiin kan rifeensi mataan sutee molaa’u. Rakkoo rifeensa mataa namarra sutu kana akkaata ittii gaababsinee ittisnuutu jira. Mallattoolee asii gadii kana yeroorra hanga yerootti yoo fayyadamne rifeensa mataa keessan carraa moluu ta’u hin hir’isaa.
Yoo mataa dhiqannu shaampoo sirrii ta’etti fayyadamuu qabna. Kunis kan antifungal ketoconazole jedhamu of keessaa qabu yoo ta’e filatamaadha.
2. Mataa jiidhaa tasuma hin filatiinaa. Haga danda’ametti yoo mataa dhiqannu ammoo kafanaan haxoofnee gogsuu irra qilleensan yoo goge filatama.
3. Nyaata sirrii nyaachuu. Nyaatota cooma hedduu of keessaa qaban nyaachuu dhiisuu. Nyaatni sukkaara hedduu of keessaa qabus haga ta’e hir’isuun barbaachisaadha. Bakka isa kanaa nyaata pirootinii garii of keessaa qaban nyaachuu qabna.
4. Aduu cimaa keessa warri oolan yookaan yeroo dheeraaf deeman mataa isaanii “kuffiyyaan” haguuganii yoo deeman gaarii ta’a.
5. Zaayita hanqaaquu *kan keessa ishiitii dhangalaatu san* halka halkan rifeensatti dibachuun ganama ganama irraa dhiqachuu qabna. Yoo ganama dhiqannu shaampoodhaan altakkaa qofa dhiqanna al lama shaampoo itt godhachuu hin qabnu.
6. Cuunfaa qullubbii diimaa, qullubnii adii, zinjibila keessaa tokko ( walitti makuu hin qabnu) halkan rifeensa keenyatti dibannee bulchinee ganama ofirraa dhiqachuu.
7. Shayii magariisa (green tea) yoo argame bishaan waliin danfisnee rifeensa keenyatti naqannee sa’aa tokoo booda ofirraa dhiquun rifeensi akka guddatu gargaara.
8. Sammuun dhiphachuu ( stress ) irraa haga dadeenyetti of eeguu qabna.
9. Yoo kun hundi fiixaan ba’uu dide moluunis nu jibisiise qorichoota mana yaalaa kennaman illee fudhachuu dandeenya.
Maddii kanan dubbisee irraa
Previous Previous post: Jeeqamni Sammuu Maali?
Next Next post: Dhalootan lammii Chaayinaa Umurii dheera kan jiraate